Japana: Ny Olana Naterak’Ireo Tamby Fandrisihana Omena ‘Maimaimpoana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2018 14:00 GMT
Tao anatin'ny drafitra fanarenany ara-toekarena, nanapa-kevitra ny hanokana vola roa miliara yens (JPY) ny governemanta Japoney hatao karazana tamby, mba hampiakarana ny fahefamividy. Mba hanatsorana izany, handray vola 12 000 yens na 20 000 yens avokoa ireo rehetra latsaky ny 18 taona ary ireo maherin'ny 65 taona, izay mahafeno ny antontan-taratasiny maha-olom-pirenena Japoney sy olona voasoratra ho mponina maharitra.
Ireo faripiadidiana ny tanàna eo an-toerana (kaominina) araka izany no tomponandraikitra amin'ny fitantanana, fitomboan'ny vesatry ny asa izay mifanojo amin'ny fidirana amin'ny taompiasàna vaovao. Ny tapaky ny volana Aprily, efa ho ny antsasaky ny kaominina no nandefa ny antontan-taratasiny ho any amin'ireo mponina ao aminy. Manolotra an'ireo fandikàna ho amin'ny teny anglisy ny taratasy misy ny fanazavàna ilay fandaharanasa ny tanànan'i Soka ao amin'ny Prefektioran'i Saitama sy Obu ao amin'ny Prefektioran'i Aich.
Sary an'i alleN, mpampiasa flickr, nampiasaina nahazoana alalàna
Ao anatina tontolo ekonomika manjavozavo, mampahatsiahy [teny anglisy] ny fandaharanasa iray nitovy taminy, tsy voarain'ny mponina tsara, tamin'ny taona 1999 io fandaharanasa io, izay tsy fahombiazana ho an'ny maro no nentiny,. Manombana fitomboana amin'ny fandaniana efa ho 0,2% ny governemanta, nefa tao tsy misy fifanarahana mazava mikasika ny fomba hampiasàna an'ireo roa miliara yens ho amin'ireo fandaniana vaovao. Milaza fitomboana 20% hatramin'ny 60% ireo vinavina.
Tato anatin'ny roa volana faramparany, voalazan'ireo fanadihadiana fa japoney marobe no nanasokajy an'io fandaharanasa io ho toy ny hafetsifetsena feno tsy fahaizana sy rehaka, ampiasain'ny governemanta Aso mba hiakarana toerana any anatin'ireo fitsapankevitra.
Teo amin'ny blaogy Yaruo, izay nahazoan'ny lahatsoratra mikasika ny krizin'ireo subprimes valisoa avy amin'ireo Alpha Blogger Awards tamin'ny taona 2008, miady hevitra mikasika ny finiavan'ny governemanta [teny japoney] ireo mpisehatra roa ASCII, Yaruo sy Yaranaio, hoe:
Yaranaio : Tsy efa mazava ho azy ve fa ny Praiminisitra Aso mizara an'ireo roa miliara yens mba hahazoana naoty ao anatin'ireo fitsapankevitra atao amin'ireo mpifidy, na efa hita aza ny fiantraikany ara-toekarena izay toa tsy misy akory?
Yaruo : Azoko antoka fa hiteny an'io ianao. Mamelà ahy hanontany anao raha toa tena heverinao tokoa fa hiakatra ny toerany any anatin'ireo fitsapankevitra, noho ny fandaharanasa iray lavin'ny dfa ho maherin'ny antsaky ny vahoaka Japoney?
Kanefa mety ho tratra ny tanjona, raha toa io ampiana ny fampihenana an'ireo haban-dalana aloa eny amin'ny ‘autoroute’. Vao haingana, nilaza tamin'ireo mpamaky azy ny Asahi Shimbun [teny japoney] mikasika fiakarana 4% hatramin'ny 26 % azon'ny Praiministra Aso tany anatin'ireo fitsapankevitra, hatramin'ny volana Martsa.
Manao sarinteny ny blaogera tetsu [teny japoney] eo amin'ny Teigaku kyufu kin (定額給付金), izay midika ara-bakiteny hoe ‘valisoa amina sanda iray tsy miova’.
Raha tokony ho Teigaku kyufu kin(定額給付金), aleo miteny ny hoe teigaku kanpu kin (低額還付金), Izany hoe, ‘famerenana ampaham-bola kely nihoatra’ na amin'ny fomba iray tena marina kokoa, ‘fikasàna iray tsy tanteraka hampiasana amin'ny endrika valisoa an'ireo tombony nihoatra tamin'ny volan-ketra, ataon'ny antoko iray eo amin'ny fitondrana izay tsy mihoatra ny 20% ny lazany eny anivon'ny vahoaka’.
Aza diso hevitra ianareo! Tsy fandraisana ‘valisoa’ io fa ‘famerenana ampahany kely’ kosa ho aty amintsika.
Raha aravona, ny vola dia mijanona ho vola. Manazava tsara ny hevitra ankapobeny mikasika an'io politika io [teny japoney] ity fanehoankevitr'i Kentaro Takekuma ity:
Toy ny hoe valisoa ilay izy, nefa rehefa tena eritreretina, vola avy amin'ny hetra naloantsika ihany io. Fomba fotsiny entina ilazàna fa izay nalaina tamintsika ihany no averina amintsika. Tsy dia manaiky loatra an'io trangan-javatra io aho! Izao e, nanao mitovy amin'izay mety ho nataon'ny rehetra fotsiny aho, nekeko izay natolotra ahy!